Zara Homewear Fall-Winter 2010-2011 | Amadoda aSitayela
Iqiniso ukuthi ngikuthole lokho Zara Wayebuye athengise izingubo zokulala lapho ngiqala ukungena esitolo sakhe se-inthanethi, kodwa woza, lokho akuzange kungimangaze kakhulu. Engingasakucabangi ukuthi uzophakamisa ne-a incwadi yokubheka yale Autumn-Winter kusuka kulayini wayo wezingubo zasekhaya.
Ngaphandle kwama-pajama agcwele ubude, anendwangu, ezinye iziphakamiso zingaphezu kokufanele ukuchitha iSonto lasekwindla kusofa zibuka ama-movie ngenkathi lina ngaphandle. Ngomugqa ofana noCalvin KleinBanesitayela esithe xaxa kunezingubo zokulala zakudala ze-El Corte Inglés, ngokwesibonelo.
Vele angikaze ngibabone bephila noma ngibathinta, okuyinto ebaluleke kakhulu. Ngoba kubhuku lokubheka (futhi ikakhulukazi kwaZara, okuhle) isikibha esine-4-euro sibukeka sifana nesama-euro angama-200, futhi uma kungenjalo, buza iBalmain. Ingabe kukhona onakho okuvela eZara Homewear?
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » IZara Homewear Fall-Winter 2010-2011
Ukuthinta okusha kwewebhu kupholile. XD
Ngiyi-lovin 'it! Ngisanda kuthenga i-jumpsuit emhlophe futhi nempunga…. Ngizoba nesibindi sokumsusa ekhaya, yebo mnumzane!
Amarula, utshwala baseNingizimu Afrika